Lahatsoratra nosoratan'i Ahmer Inam
Ahmer Inam dia Chief AI Officer ho an'ny Pactera EDGE, orinasam-pifandraisana nomerika sy teknolojia manerantany. Mpanatanteraka Data sy Analytics efa za-draharaha izy manana traikefa 20+ taona amin'ny fitarihana ny fanovana eo amin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny angon-drakitra, teknolojia, rafitra fampahalalana, analytics ary vokatra momba ny angona.
Sabotsy, Oktobra 23, 2021 Zoma, Oktobra 22, 2021 Ahmer Inam
Vahaolana mandeha amin'ny herin'ny AI dia mila andiana angon-drakitra mba hahomby. Ary ny famoronana ireo angon-drakitra ireo dia feno olana mitongilana mitongilana amin'ny ambaratonga rafitra. Ny olona rehetra dia mijaly noho ny fitongilanana (na saina na tsy mahatsiaro tena). Ny fitongilanana dia mety misy endrika isan-karazany: ara-jeografika, fiteny, sosialy-toekarena, fanavakavahana ary fanavakavahana. Ary ireo fitongilanana rafitra ireo dia apetraka ao anaty angon-drakitra, izay mety hiteraka vokatra AI izay maharitra sy mampitombo ny fitongilanana. Ny fikambanana dia mila fomba fisainana manalefaka